U kala qaad Faylka waaweyn ee PST Faylasha Yaryar - Tilmaam Tallaabo-tallaabo ah
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair U kala qaad Faylka waaweyn ee PST kuwa yaryar
Isticmaalka DataNumen Outlook Repair in loo kala qaado Feyl Dheer kuwa yaryar
Kordhinta degdegga ah ee xiriirka shakhsiyeed iyo macluumaadka, feylka 'Outlook PST', oo ay ku jiraan xogtaan, ayaa sidoo kale si ballaadhan u ballaariyay. Sidaa darteed, mararka qaarkood waxaan u baahanahay inaan u kala qaadno feylka weyn ee PST kuwo yaryar, sababahan soo socda awgood:
Cabir badan oo fayl ah iyo alaabo aad u tiro badan ayaa horseedi doona xawaare gaabis ku socda howlo badan, sida raadinta, dhaqaaqista, iwm, sidaa darteed waxaad u kala qaybin kartaa qaybo yaryar oo aad ka heli kartaa maareyn sahlan oo dhakhso leh.
Noocyadii hore ee 'Outlook' (97 ilaa 2002) ma taageerayaan faylasha ka weyn 2GB, sidaa darteed haddii faylkaagu gaaro xadkaas laakiin aad wali rabto inaad ku isticmaasho noocyadii hore, markaa sida kaliya ee loo maro waa in loo kala qaybiyo gaballo yaryar.
Haddii aad ka heli karto waxyaabaha ku jira faylka weyn ee PST ee Muuqaalkaaga, markaa waad isticmaali kartaa Muuqaalka si loogu kala qaybiyo gacanta.
DataNumen Outlook Repair ayaa kaa caawin kara inaad u kala qaaddid faylka weyn ee PST kuwa yaryar.
Waxaad ku soo qori kartaa magaca faylka go'an si toos ah ama waxaad riixi kartaa badhanka si aad u caleenta u xulato magaca faylka go'an.
Waxaad dooran kartaa qaabka faylka PST ee go'an sanduuqa combo agtooda sanduuqa wax ka beddelka faylka, qaababka suurtagalka ah waa Muuqaalka 97-2002 iyo Muuqaalka 2003-2010. Haddii aad uga tagto qaabka "Awood Gaar Ah", markaa DataNumen Outlook Repair wuxuu soo saari doonaa faylka PST-ga go'an ee la jaan qaadaya Muuqaalka lagu rakibay kombiyuutarka maxalliga ah.
Click ah batoonka, iyo DataNumen Outlook Repair doonaa start iskaanka feylka PST-ga isha, dib u soo kabashada iyo soo ururinta waxyaabaha ku jira, ka dibna ku ridaya waxyaabahan la soo helay feyl cusub oo PST ah oo magaciisu ku qoran yahay Tallaabada 6. Waxaan tusaale ahaan u adeegsan doonnaa Muuqaalka_fixed.pst.
U kala qaad Faylka waaweyn ee PST kuwa yaryar